Iisouks zase Marrakech: imibala, iiroma kunye nehaggling | Ukuhamba kwe-Absolut
Iisouks zaseMarrakech: imibala, i-aroma kunye nehaggling
UAlberto Legs | | Morocco
Xa sicinga Morocco, omnye wemifanekiso yokuqala ethi qatha engqondweni ihlala kwiisokisi zayo, ileyibhile yezitali ezigcwele imibala apho ivumba lepepermint, isiqhumiso okanye isikhumba zixutywe nabarhwebi abomeleleyo kubugcisa bokulukuhla undwendwe oludibene nale meccas yokuphamba . Ndwendwela iisokisi zaseMarrakech Ifuna izivamvo zethu ezintlanu kunye nenye ukuze siyiphucule, leyo yobugcisa bokuqhutywa sisixeko esibaluleke kakhulu eMorocco.
ISouq Smarine: umqobo weesokisi zaseMarrakech
Ukuba ukhe wafunda Ubusuku baseArabia, Ngokuqinisekileyo uyakuqonda inxenye yento exoticism xa ufika kuyo Isikwere seJemaa-el-FnaIziko lemithambo-luvo lesixeko saseMarrakech. Indawo apho charisma yakhe ikhethekile kangangokuba ikomiti ye Unesco Kwafuneka ukuba kuqulunqwe icandelo elitsha eliquka abakhafuli beenyoka, amagcisa we tattoo avela Ikofere, iitafile zokutya, ukurhawuzelela, iikhaphethi kunye nezibane okanye ababalisi bamabali abasabalisa iintsomi zasentlango kuyo yonke le sikwere. Umboniso weemvakalelo kunye nendawo efanelekileyo yokungena kuyo Marrakech iisokisi.
Emantla eJemaa-el-Fna uya kufumana i-arch echaza isitalato i USouq Smarine, eyona iphambili kuzo zonke iisokisi ezihlangana eMarrakech. Ukusukela ngoku ukuya phambili, izibane zeBerber eziqhelekileyo, iisiliphu kunye namandongomane, ezintathu kumakhulu eemveliso ezinokuthengwa ezitratweni zayo, ziqala ukubonakala. Ngasekunene kokuphela kweSmarine siza kufumana ii-alleys ezimbini: enye ekhokelela kwimadrassa UBen youseffEnye ye iiyunivesithi eziphambili zehlabathi zeKoran, kunye neempahla zesikhumba, U-El-Kebir. Ukuba siqhubeka nokugqibela siya kuphelela kwi- Isikwere seRahba Kedima, eyona ndawo ifanelekileyo yokumisa ukungcamla iti yamaMoor ngelixa sithatha amandla okulahleka kwiisokisi.
Kwiimarike zaseMorocco, ngakumbi ngakumbi kwezo zaseMarrakech, kubalulekile ukuba ungalilawuli ixesha, uzivumele uhambe kwaye wazi ukuba apha, kwiisokisi, haggling kufuneka, oko kuthetha ukuba umrhwebi ngamnye uyayazi into esiyivumba, siyingcamle kwaye siyigcine, eyethu "isibophelelo" sokubheja kweyona xabiso liphantsi de sifumane isithembiso ebesizokukhangela (kwimeko yam ndiye ndagqiba ukuthenga iimveliso Ixabiso labo lokuqala ukuya esiphelweni sosuku, wayediniwe). Abanini bevenkile, ukongeza, bayayazi indlela yokuthengisa imveliso kakuhle kuwe kwaye banelise undwendwe (abanye bade babenayo uluhlu lokudlala ukuba bavelise ngokusekwe kubuzwe bomntu otyelele iposti yabo).
Iisokisi zaseMarrakech zibandakanya iimveliso zazo zonke izinto ozithandayo: isouq Larzal, apho kuthengiswa uboya ekuzeni kokusa, the U-souq Smata, eyona ilungileyo yokuthenga izikhumba okanye iisiliphu, i IHaddadine (okanye abakhandi bentsimbi), i kwazi, Abathandi beminquma, kunye nemifuno, nkqu nabazithandayo Imarike yamakhoboka IBerber imisebenzi yazo eyapheliswayo yapheliswa ngo-1912 nalapho kubanjwa khona iifandesi zekhaphethi namhlanje.
Ezinye iivenkile ziya kuphinda zikhumbuze abanye ukuba besikhe satyelela kwiiyure ezimbini ezidlulileyo, siyakuphela sonwabile livumba lesikhumba kunye nehaggling, siqhathwe yimibala kunye nezibane zeArabia, kodwa oku kuyalahleka kwiisokisi zaseMarrakech: ukuvumela ngokwakho hamba uyokuva ipepermint enikezelwa ngumrhwebi, uthabathe ihookah, ukonga imihla kunye neepistachios ngelixa umthengisi okrelekrele ekukhohlisa ngetreyi yee-Arabhu.
Ngorhatya, ezinye iitafile ziyavalwa kwaye ezinye zibonisa ukukhanya kukhombisa ukuguqula iisokisi zibe ziindawo zobugqi. Ukuxakeka okuqhubekayo ukubetha xa sibuyela kwindawo yethu yokuqala kwaye sikhangela indawo yokuphumla, apho siqhubeka khona nokufumana imvakalelo emitsha. Ngeso sizathu, Yitya eJemaa el-Fna iba yeyona ndlela ilungileyo yokuphelisa usuku lwethu entliziyweni kaMarrakech.
Kwisikwere abanini beetafile zokutya bathetha ngcono iSpanish kunokuba ucinga kwaye banikezela yonke into ukusuka kwinyama enamaxesha ukuya kwi-pickles yazo zonke incasa kunye nezinongo. Ibhiya iyatyiwa apha ngaphezulu kwayo nayiphi na enye indawo esixekweni kunye nokuba kunokwenzeka thatha itafile yemvana kwiCafé de France, yenye yezona ndawo ziyintsomi eJemaa el-Fna, iba sisizathu esifanelekileyo sokucinga ngeesokisi ezithile, ekunokwenzeka ukuba nazo iikhaphethi zibhabhe xa abarhwebi bebuyela ekhaya.
Shedyuli: Ukususela nge-9 kusasa ukuya kwi-7 emva kwemini.
Iiyure zoThengiso lweKaphethi: Ukusuka nge-4 ukuya kwi-6 emva kwemini kwiNtengiso yamakhoboka.
Eyona iiyure zokundwendwela: Ukusuka kwi-10 ukuya kwi-1 kusasa / ukusuka kwi-5 kuye kwi-7 emva kwemini kwaye uqhagamshele neJemaa el-Fna.
Kuphi ukufumana iti kwiisokisi: I-Café des Épices, kwisikwere iRahba Kedima.
Ukutya phi: nakweyiphi na ivenkile eJemaa el-Fna okanye, ingcebiso yam yobuqu, uEl Toubkal.
Ifoto ngu-Alberto Piernas
Indawo yokulala: Esandula kuvulwa URiad Azcona, ziimitha ezingama-800 ukusuka eDjemaa el Fna, inamagumbi aphindwe kabini ngamaxabiso aphakathi kwama-35 nama-50 eeuros ngobusuku bonke kunye nedama lokuqubha elikwibala elinomtsalane kunye nesidlo sakusasa esenziwe ekhaya kubandakanywa (kunye nenketho yokutya kwi-riad efanayo). Olunye ukhetho kukukhetha Amour waseRiyadh, ibekwe Izitrato nje ezibini ukusuka eJemaa el-Fna kunye namaxabiso aphakathi kwe-15 ukuya kwi-20 yeeruro kwigumbi eliphindwe kabini. Indawo yokuhlala epholileyo kunye emnandi enethambeka onokucinga ngayo isixeko. Imirhumo ziindlela zokwakha eziqhelekileyo apho zonke iipaseji kunye namagumbi ajikeleze intendelezo esembindini ngomthombo kunye nezityalo.
Ngaba unesibindi sokundwendwela iisokisi zaseMarrakech?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iisouks zaseMarrakech: imibala, i-aroma kunye nehaggling
Iindawo ezisixhenxe ezimibalabala eAfrika
Iindawo ezili-15 ezininzi ezimibalabala emhlabeni